SOMALITALK.COM: WARARKA SEPT 2008
Sidaa daraadeed, jabkii gaaray dhaqdhaqaaqii ugu xoog badnaa uguna dambeeyay ee reer saylac, garwadeenkana uu ka ahaa Alimaam Axmed Guray (934-949H/ 1527- 1542M) kuma dhammaan sida guushii Isbayn (Spain) ka heshay dawladdii la oran jiray Alandalus oo diin, dawlad iyo jiritaan (kayaan) siyaasi ah, oo islaami ah oo madaxbannaan u luntay. Alandalus waxay mar labaad ku laabatay gaalnimadii, waxayna ka mid noqotay gobollada dawladda Isbayn. Halka xabashi awoodi kari wayday reer saylac in ay ka tirtirto diinta islaamka.
Teeriyo maanta, reer saylac diintoodi (Alislaam) way haystaan, xabashina kuma guulaysan in ay gaalo u rogto dadkii muslimka ahaa oo ku dhaqnaa Harar, saylac iyo meelo kale oo hadda ka mid ah dhulalka loo yaqaan; Jabuuti, Soomaaliya, Harar iyo Eretriya. Ha yeeshee, damacii xabashi, wuxuu joogteeyay loolanka soomaali iyo xabashi ka dhextaagan teeriyo qarniyadii dhexe ilaa iyo maalinka maanta ah. Maxaa yeelay; wali waxaa taagan ujeeddadii xabashida oo ahayd qabshashada dhulalka iyada ku xeeran. Niyo-xumidaa, waxaa tillmaan u ah in Itoobiya ilaa iyo maanta xoog ciidan ay ku haysato Ogaadeenya (Soomaali Galbeed).
Haaddaba, guushii xabashi kaga itaal roonaatay reer saylac dhammaadkii casrigii dhaxe ma soo afjarin loolankii, inkastoo, miisaanka dhanka xabashida u janjeersaday, sabab ay u ahayd kaalmadii reer Yurub (Europe), taa oo ilaa iyo maanta ku socota Itoobiya. Waxaan araganaa in cadaawaddii xabashi u haysay islaamka iyo muslimiinta ay soo caad-baxday, islamarkii, islaamku “Jasiiradda Carbeed” ka soo baxay. Xabashi, colaadda ay islaamka iyo muslimiinta u hayso waxay ku soo bandhigtay weerarradii ay ku soo qaadday Xijaas waqtigii Nabigu (SSC) uu noolaa, sidoo kale, waqtigii AlKhulafaa' Alraashidiin, dabadeed waqtigii Umawiyiintii iyo Cabbaasiyiinta. Xaqiiqada, ma dabooli karto gobanimadii Najaashi ASXAMA uu ku soo dhaweeyay saxaabadii Nabiga (SSC) kolkay gaaladii Maka dibindaab yadoodi xajin kari waayeen oo u qaxeen (Haajareen) dhulka xabashida. Wanaaggii iyo gobanimadii waxay ku dhammaadeen dhimashadii Najaashi Asxama, dabadeed, waxaa soo sare maray dhabtii; ragga diinta iyo amiiradii xabashida. Kuwaa oo dardargaliyay in ay shacabka iyo boqorrada xabashida qaniin-siiyaan (ku diraan) islaamka iyo muslimiinta.
Bacdamaa, reer saylac ahayeen shucuubta Islaamka midda xabashi ugu dagaan dhaw, collaysigii iyo uur-ka-nacaybkii oo idil waxay kula kufeen reer saylac. Dil, boob iyo burburin intaba ugama ay turin boqorradii islaamka ahaa oo soo baxay bartamihii qarnigii toddobaad ee Hijriga/qarnigii saddex iyo tobnaad ee Miilaadiga. Runtii, reer saylac gacmaha kama laaban weeraradii oo, waxay sameeyeen wax kasta oo iska-caabin ah oo ay la iman kareen; waa halgameen, jihaadeen intay tabari u gaadho. Xabashi waxay ku weerareen aqalladooda (guryahooda), waxayna ku faleen; dil, boob iyo burburin la mid ah wixii lagu falay, inkastoo, fursadaha xabashi ay heshay ay ka badnaayeen kuwii soo maray reer saylac.
Sidaa daraadeed, burburka gaaray dhulka reer saylac mid la mid ah ma gaarin xabashi, maxaawacay, waxaa jiray sababo gundhig u ah taagdarrada iyo jabka reer saylac marar badan gaaray. Waxaa kale oo jirta dhab (xaqiiq) aan laga indho-qarsan Karin oo ah; in xooggagii islaamiga ahaa oo dalalka kale ka dhisnaa aysan ku taageerin reer saylac jihaadkii ay kala hortageen xabashida. Garbo, islaami ah oo gacan kaalmo u taagay reer saylac ma jirin. Nasiib darro, reer saylac waxaa ku meersanaa “Boqorro Masiixi” ah oo waqooyi ka xigay oo xabashi ama Nuuba ah, cawaan koofur Galbeed ka xigay, muslimiin tag daran oo Muqdishow oo koofur bari ah ku nool iyo Yaman oo bari ka saran Gacanka Cadmeed. Sidaa awgeed, reer saylac waxay jihaad galeen iyaga oo darbiga dhabarka ku haya (meel loo irkado aan la-hayn), wax taageero ahna aan helin, marka laga reebo caga-joglayn “Salaadiintii Masar” ay ku baqdin galin jireen Kobtigi ku nool Masar . Taa, oo ay ulajeedeen in xabashi joojiso darayada ay ku hayso muslimiinta saylac iyo muslimiinta dhulka xabashda ku nool. Sida kuu muuqata, tallaabadaa, waxay noqotay; hiil aan wax saamayn ah ku yeelan loolankii reer saylac iyo xabashi.
Kolkii ay yimaadeen Turkidii Cusmaaniyiinta oo ay la xiriireen reer saylac, oo ay damceen in ay taageeraan dhaqdhaqaaqii Imaam Axmed Gureey (934-949H/1527-1542M), soo galiddii mandiqadda (Geeska Afrika) waxaa kaga soo hormaray Burtuqaal (Portugal) oo dagdag ulaxiriiray xabashi, dabadeedna, wada dagsaday laba yool oo kala ah: Marka koowaad: Muslimiinta mandiqadda ku nool in la wada faro-saaro (la xanuujiyo). Marka labaad: in awoodda Turkida laga horistaago ku soo qulqulka mandiqadda. Isbahaysigii Burtuqaal iyo xabashi waa gaareen yoolkii, natiijadiina waxay noqotay in ay si fudud lugaha isugu dhuftaan; iska-caabintii islaamiga ahayd oo sida mintid-nimada ah uga hortagtay “saliibiyadii xabashida” kartidana u yeelatay in xabashi ku baacsato duusho “Buurta Xabashida”, sigtana diinta masiixiyadda oo xabashi haysato.
Waxaa laga yaabaa, duruufihii “Dunida Islaamku” ay soo mareen; teeriyo xilligii ay oogmeen “Dagaalladii Saliibiga” ahaa ee dhulka Shaam (491H / 1097M) iyo weeraradii Mongoolku (Mongolians) ku qaadeen Baqdaad (9656H/1258M) in ay sababa u ahaayeen; wax kaalmo ah oo ku filan in aysan helin reer saylac. Dhanka kale, boqorradii reer saylac, qudhoodu isma dhaamin, oo is-afgarasho la'aan iyo baratan xoog leh ayaa dhexdooda ka taagnaa, qaarbaa, hagarashada walaalihi u soo dhawaystay boqorradii xabashida ee cadawga ahaa.
Reer saylac basarkaa, waxay la wadaageen boqorradii muslimka ahaa oo Alandalus ka talin jiray qarinigii kow iyo tobnaad ee Miilaadiga. Midba, midka kale in uu haadaan ka tuuro, tiirarkana u fakiyo awgeed, wuxuu hoosta soo gashaday boqorradii nasaarada (gaalada) oo Isbayn. Taladaas, kuwan iyo kuweerba, waxay badday; guul darrooyin waawayn, dhaxalkiina wuxuu noqday; in xukun islaami ah looga diimo Alandalus, dhulkii reer saylacna muslim tag darran ku soo haro. Khilaaf iyo tartan, aawadi boqorradii reer saylac lagama helin; midnimo siyaasi ah oo u suuragalisa, guul kama dambays ah ama caabin mudda dheer socota. Garaadkoodi (caqligoodi) wuxuu ku soo uruuray; markay dareemaan oo qura, cududda ciidanka xabashida; in ay taageeraan, abbaan-duulka dagaalkana u dhiibaan boqorradii Awfat ama Cadal (awdal). Kala firiirsanaanta siyaasadeed waxay ahayd halka sartu ka quruntay oo sababtay tag darrida boqorradii saylac ee islaamiga ahaa, taa oo xabashi tustay; mid walba in ay gaarki u baacsato (weerarto), qaarra u liqdo, sida nasaaradii Isbayn u liqday boqorradii Alandalus oo kooxaysiga (Daa-ifada) ku dhisnaa.
 Jamhuuriyaddii Soomaaliyana ugu soo duushay, Muqdhisana maanta u fadhido.
 Xijaas waa dhulka Sacuudiga qayb ka mid ah.
Khulafaa'a Alraashidiin; Waa afarta khaliif oo kala ah; Abuubakar, Cumar, Cusmaan iyo Cali (Dhammaantood Alaaha Raalli ka noqdo).
Umawiyiintii iyo Cabbaasiyiintii: waa labadii talis oo islaamka u talin jiray, midka hore Shaam ayuu ka dhismay, midka dambana Ciraaq ayuu ka dhismay.
Nuuba: waa halka ay dagaan dadka Nuubada loo yaqaan, koofurta fog oo Masar iyo Suudaan.
Gacanka Cadmeed: waa marin biyoodka u dhaxeeya Yaman iyo Eretriya/Jabuuti.
Kobtig (Coptic): ama Alaqbaadh, waxay ka tirsanyihiin Kaniisadda Artudogsiga Bari. Waa dad laga badanyahay oo Masar ku dhaqan, Kaniisadda Al-iskandariya ayaa laga hagaa, Itoobiyana waa ku dhaqmaan
Darayo: surmayn, tab tabaha lagdinta ka mid ah oo qofka luqunta la isaga duubo. Ruuxa darayada lagu
qabtay, waa in uu dhulka isudaayo, ama ruuxa darayada la helay, meel halis oo sababta in darayada uu ka furo asiibo (ku dhufto).
Cusmaaniyiin (Ottoman Empire): waa khilaafadii Islaamiga ahayd oo ka dhisantay Turkiya (1299-1924M). Magacu wuxuu ka soo jeedaa GUSMAAN BIN ARDHAGOL oo aasaasihii ah.
Mongooliga (Mongolians): Waa dad ku firiisan Asiya, waxaa hore u mideeyay Jaanjiskhaan. Dhib aan yarayn ayay Muslimka hore ugu gaysteen. Baqdaad waxay kharibeen (658H/1260M), Dimishiqna galeen 658H/1260M). Duullamadoodi waxaa lagu joojiyay Caynu-jaaluut oo falastiin ah. Tiimoorlinka ayaa ka mid ah raga ugu caansan.
Qoraaladii Hore Cabdiwali...